फिचर यस्तो पनि कला / साहित्य
केशवराज जोशी काठमाडौं, १२ जेठ
बाइरनको लेखन शिल्पलाई देखेर लेख्नेहरूले मुख मिठ्याउँदै भन्छन् होला, ‘वाह ! लेखक हुनु त यस्तो हुनु ।’
उनको प्रेम जीवन नियाल्ने असफल प्रेमीहरूले पनि भन्दा हुन्, ‘वाह ! प्रेम पाउनु त बाइरनको जस्तो ।’
यति हुँदाहुँदै पनि काव्य लेखनका हिसाबले बाइरन सबैका लागि प्रेरक बन्न सक्छन् तर प्रेमको सवालमा एक जनासित मात्र प्रेम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नेहरूका लागि भने उनी किमार्थ आदर्श हुन सक्दैनन् ।
हो, बाइरनले कविता लेखे र लेखेरै नाम कमाए । तर, त्यसभन्दा धेरै उनको प्रेम जीवन चर्चामा रह्यो । उनको प्रेम जीवन राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय चर्चाको विषय बन्ने गथ्र्यो । उनी पनि प्रेम गर्नका लागि राज्यको सीमा नै कहाँ हेर्थे र ! जहाँ जे पायो, त्यही समाइहाल्ने स्वभावका थिए ।
प्रेमको सवालमा उनको मन कति फराकिलो थियो भने, त्यसमा जति धेरै महिलाहरू पनि सजिलै अटाउन सक्थे । उनको प्रेम-व्यवस्थापनको यो अद्भूत कलालाई देखेर जोकोही चकित पर्थे ।
बाइरन अत्यन्तै सुन्दर थिए । उनको अपार सुन्दरताकै कारण उनी भनेपछि युवती र महिलाहरू हुरुक्कै हुन्थे । भनिन्छ, बाइरन बाहिर निस्कियो रे भन्ने सुनेपछि आमाहरू आफ्नी छोरीहरूलाई घरभित्र थुन्थे रे ! यो सबै उनको सुन्दर अनुहारकै कमाल थियो ।
उनी अलिअलि खोच्याएर हिँड्थे । उनको एउटा खुट्टामा समस्या थियो । तर, कसैले लङ्गडो भन्यो भने उनी असाध्यै रिसाउँथे । जसरी उनमा प्रेम गर्ने अपार क्षमता थियो, त्यही अनुपातमा रिसाउने स्वभाव पनि थियो ।
उनको लेख्ने क्षमताको कुरै गरी साध्य छैन । बाइरनले आफ्नो ३६ वर्षको छोटो जीवनकालमा निरन्तर लेखे । युरोपेली साहित्यलाई उनले नयाँ उचाइमा पुर्‍याए । त्यस समयमा युरोपमा एक जना नेपोलियन बोनापार्टको चर्चा हुन्थ्यो भने अर्को बाइरनको । यिनको कलमले यिनलाई प्रसिद्धीको शिखरमै पुर्‍याएको थियो ।
विश्वकवि बाइरनको जन्म सन् १७८८ मा भएको थियो । उनका बुबा कुलतमा परेका दुराचारी व्यक्ति थिए, जसले परिवारको श्री सम्पत्ति स्वाहा मात्र पारेनन्, श्रीमतीलाई समेत छाडेर फ्रान्स गएका थिए । पछि फ्रान्समै उनको मृत्यु भयो ।
आमा पनि असाध्यै रिसाहा स्वभावकी थिइन् । बाइरनलाई लङ्गडो भनेको मनै नपर्ने तर आमाले भने रिस उठेको बेलामा सधैँ उनलाई त्यही भनेर गाली गर्ने गर्थिन्, जसले गर्दा उनी अत्यन्तै चिढिन्थे ।
८ वर्षको उमेरमा बाइरन गम्भीर बिरामी परे । आमाले आस मारिसकेकी थिइन् र पनि छोरालाई बचाउन सकिने झिनो आशाले पहाडमा लगिन् ।
त्यो पहाडमा उनले प्राकृतिक सौन्दर्यलाई नजिकबाट नियाल्ने अवसर पाए । उनी त्यो सौन्दर्यबाट मोहित भए । त्यहीँ उनी आफ्नी बालसखा मेरी डफप्रति पनि मोहित भए । अपार सौन्दर्यकी धनी मेरीप्रति लोभिए, नजिकिए र प्रेममा परे । ८ वर्षको कलिलो उमेरमै प्रेम ! प्रेम त आाखिर प्रेम न हो, यसले उमेर कहाँ हेर्छ र !
सन् १८०७ मा उनको प्रथम पुस्तक आयो, जसको नाम थियो- ‘आवर्स अफ आइडलनेस् ।’
यस पुस्तकले समालोचकहरूका तीखा र धारिला प्रतिक्रियाको सामना गर्नुपर्‍यो । धेरै आलोचनाहरूबाट अत्तालिएका उनी आलोचनाहरूको जवाफ लेख्न बसे अनि निस्कियो सुन्दर व्यंग्य कविता- ‘इङ्गलिस बर्ड्स एन्ड स्कच रिभ्युअर्स ।’
सन् १८०९ मा बाइरन पोर्चुगल, स्पेन, अल्बानिया, ग्रिसको भ्रमणमा निस्किए । साहित्य लेखनमा उनको उक्त भ्रमणको ठूलो प्रभाव पर्‍यो । ग्रिसको हावापानी र त्यहाँको उदार विचार र उदार व्यवहार तथा आरामदायी जीवनले त उनलाई अझ धेरै मोहित तुल्यायो । खुलापन र खुलामन ग्रिसको प्राचीनदेखिकै स्वभाव जो थियो ।
उक्त भ्रमणपछि उनले प्रसिद्ध कृति ‘चाइल्ड हेरोल्ड’का २ सर्ग लेखे । यस किताबले उनलाई सबैको प्रिय कवि बनायो । सबैको मुखमा बाइरनको नाम झुण्डियो ।
साहित्यानुरागीहरूका ओठमा उनका कविताका लाइनहरू सुनिन थाले । मान्छेहरूले उनको नामसँगै उनका कविताका लाइनहरू पनि मन-मुटुमा सजाए ।
उनको कलमको ताकतको पनि कुनै जवाफ नै छैन । पहिलो पुस्तकमा आलोचनाहरूले झण्डै थला परेका उनले आफ्नो अर्को कृतिमा आलोचकहरूलाई समेत प्रशंसा गर्न बाध्य तुल्याए । किताब लोकप्रिय भयो । उनको ख्याति द्रुत गतिमा फैलियो । त्यसपछि उनले जीवनमा पछाडि फर्किएर हेर्नुपरेन । उनले लोकप्रियताको सगरमाथा चुमे ।
स्याम्युअल रोेजर्सले उक्त कविता पढे । श्रीमतीलाई पनि पढ्न दिए । लेडी क्यारोलिन बाइरनका कवितामा लठ्ठ भएर हराइन् । अझ भनौँ, उनले आफ्नो होसहवास नै गुमाइन् ।
उनले बाइरनलाई भेट्ने चाहना राखिन् । श्रीमतीको पागलपन देखेर अचम्भित भएका उनका श्रीमानले नै उनलाई बाइरनसम्म पुर्‍याइदिए । उनी पनि देख्नमा त्यतिकै सुन्दर थिइन् । सुन्दर मान्छे देखेपछि बाइरन नलोभिने कुरै भएन । आखिर उनी पनि सौन्दर्य पिपासु न ठहरिए !
उनीहरू प्रेममा परे र उक्त प्रेमका बारेमा लण्डनभर हल्ला चल्यो । सारा लण्डनले थाहा पाउँदा उनका श्रीमानले थाहा नपाउने कुरै भएन । उनका श्रीमानले त्यो सम्बन्धलाई सामान्य रूपमा लिए ।
त्यसपछि बाइरन अर्की ४० वर्षीया सुन्दरीको प्रेममा परे । ती सुन्दरीको नाम थियो, लेडी अक्सफोर्ड । लेडी अक्सफोर्ड आफैँमा सुन्दरताकी प्रतिमूर्ति थिइन् । उनका श्रीमान दिनभर जङ्गलतिर जान्थे । उनीहरू भने प्रेमालापमा मस्त रहन्थे ।
सन् १८१३ मा उनले नातामा बहिनी पर्ने अगस्टासित प्रेम सम्बन्ध गाँसे । उक्त सम्बन्धले भने उनी धेरै आलोचित भए । सानातिना आलोचनाबाट विचलित नहुने बाइरनले त्यस समयमा ‘बेलायतकी महारानी र आफ्नी आमाबाहेक जोसुकैसित प्रेम गर्न स्वतन्त्र छु’ भनेर घोषणा गरेका थिए ।
घोषणा त गरे तर थेग्नै नसकिने आलोचनाका कारण बाध्य भएर अनाबेल्लासित विवाह गरे । सुहागरातमै श्रीमतीलाई उनीसित बाध्य भएर मात्र विवाह गरेको बताएका बाइरनको दाम्पत्य जीवन भने सुखद रहेन ।
श्रीमतीसित नियमितजसो झगडा भइरहने उनले श्रीमतीमाथि हातपात त गरेनन् तर रिसको झोँकमा घरका कुर्सी, टेबुल वा अन्य सामग्री केही बाँकी राखेनन् । उनी रिस उठ्यो भने आफ्नो अगाडि रहेका सामानहरू तोडफोड गर्थे ।
श्रीमतीलाई यिनी पागल भएको आशंका भयो । तर, डाक्टरले उनी पागल नभएको घोषणा गरे । पछि गएर धेरै ठूलो बबण्डर र बदनामीका बीच यी २ ले सम्बन्ध बिच्छेद गरे ।
सन् १८१६ मा बाइरन जेनेभा गए । त्यसपछि उनी बेलायत फर्किएर आएनन् । फ्रान्समा कवि शेलीसित निकटता बढ्यो । उनले त्यहाँ चाइल्ड हेराल्डको तेस्रो सर्ग पूरा गरे ।
सन् १८१७ मा उनी भेनिस गए । भेनिसवासीको बाँच्ने कलाबाट उनी अत्यन्त प्रभावित भए । उनीहरूको बोली, घरको बनोटलगायतका कुराबाट बाइरन मोहित भए ।
बाइरन जहाँ गए पनि महिलाहरूको साथ छुट्ने कुरै भएन । त्यहाँ पनि उनको भेट १९ वर्षीया काउन्टेस गुक्कुलीसँग भयो, जसका ६० वर्षका श्रीमान थिए । केही समय उनले कान्टेससँगको प्रेममा बिताए ।
त्यसपछि उनी रोम गए । रोममा २२ वर्षीया मार्गरिटा कग्नीसँग भेट भयो । मार्गरिटा सुन्दर थिइन् तर अपरिष्कृत र अपठित । आखिर त्यस्ती महिला पनि यिनको मनमा बस्न सफल भइन् । मनको अगाडि कसको के लाग्छ र ! मनपरेपछि मन परिन्, परिन् ।
लेखनमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल बाइरनले सन् १९१८ मा चाइल्ड हेराल्डको चौथो सर्ग लेखेर प्रकाशन गरे र आफ्नो जीवनको सर्वश्रेष्ठ काव्य ‘डोन ज्वाँ’ पनि यहीँ बसेर लेखे । डोन ज्वाँ लेख्न उनलाई पूरा ५ वर्ष लाग्यो ।
वाइरनले बाँचेको समयमा युरोप अत्यन्त अशान्त थियो । त्यो वास्तवमा युरोपका लागि हत्या, हिंसा र काटमारको युग थियो । विनाप्रयोजन हत्या र मारकाट मच्चाउनेहरूलाई नायक मान्ने समय थियो त्यो । धेरै आशाले हेरिएको फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिपछि पनि समाज झन् जर्जर अवस्थामा गएको अत्यन्तै निराशावादी कालखण्ड थियो ।
वास्तवमा कोमल मन हुनेहरूलाई उकुसमुकुस हुने समय थियो त्यो । स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्वको नारा घन्काएर फ्रान्सेलीहरूले क्रान्ति सफल त पारे तर राज्यको मूल चरित्र यी ३ वटै आदर्शविपरीत थियो, जसले कवि साहित्यकारहरूलाई निराश तुल्याएको थियो । उनका कवितामा त्यो असन्तोषको भाव पर्याप्त पाइन्छ । त्यो उकुसमुक्ुस र अन्योल पनि छुटेको छैन ।
सन् १८२३ मा आन्दोलनकारीलाई सघाउन उनी ग्रिस गए । १९ अप्रिल १८२४ मा बाइरनको भौतिक शरीरले यो संसार परित्याग गर्‍यो । कवि बाइरन ३६ वर्षको कलिलो उमेरमै यस भौतिक संसारबाट बिदा भएका थिए । तर, उनको कलमले भने अहिले पनि उनी बाँचेको युग बोलिरहेको छ ।
संयोग कस्तो भने, उनका बाबुको मृत्यु पनि ३६ वर्षकै उमेरमा भएको थियो । जुन मात्रामा बाइरनको कलम दौडियो, त्यही मात्रामा उनको मन पनि दौडियो । उनको साहित्यले जति ख्याति कमायो, उनका प्रेम कहानीहरूले पनि त्यत्तिकै चर्चा बटुले ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ १२, २०७७, १२:१६:००
ताराको 'पराईको सिन्दुर' सार्वजनिक
दीपकराजलाई दिदी-बहिनीले कमेन्ट पढ्ने डर !